Shiinaha Qiimaha qiima dhimista leh Shiinaha Shirarka Cilmiga ah ee Venlo Hollow Glass Grow Teens Kits/Greenhouse for Agriculture Hydroponics-PMV001 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aixiang
Xarunta soo dejinta
Booqo Warshadda Online
Nooca Venlo Nooca Waasacyada Badan
Kormeerka Tayada ee Shiinaha arkay Fur saqafka Ilkaha ...
Greenhouse-ka Madoobaaday oo leh Seedbed-PB oo lakab badan leh ...
Factory Price Shiinaha Ganacsiga Greenhouse Poly Film ...
Qiimo dhimis China Intelligent Venlo Hollow Gl ...
Qiimaha hoose Shiinaha Waqooyiga Ameerika Hot Sale Hot Automatic ...
Shiinaha OEM Shiinaha Shiinaha Kaliya Dhex/Ganacsi/Tunnel/Film P ...
In Stock Fast Delivery Beeraha Single-taako Plas ...
Shiinaha Factory jaban Hot Dhaqaale iyo Practical Mul ...
Qiimaha jaban Film PO Ganacsi Weyn Oo Dabool Muraayada G ...
Galvanized Steel Meegaarka Multi taako PE Greenhouse Film ...
Greenhouse tunnel Hoop Tunnel - Beeraha ...
Qiimo dhimis Shiinuhu Caqliga Venlo Hollow Glass Kobcinta Teendhooyinka Xirmooyinka/Greenhouse for Hydroponics-PMV001
Nooca Venlo ee aqalka dhirta lagu koriyo ee galaaska badan leh ayaa ah nooca aqalka dhirta lagu koriyo oo horumarsan oo laga keenay Netherlands. Waxay leedahay muuqaal casri ah, qaab -dhismeed deggan, wax -qabadka ilaalinta kulaylka oo aad u fiican, saabuunno roobab badan, taako ballaadhan, qaab -dhismeedka shabakadda, dheecaan weyn, iska -caabin xoog leh oo dabaysha, waxayna ku habboon tahay meelaha dabaysha iyo roobabku ku badan yihiin. Sababtoo ah gudbinta iftiinka sare iyo waxqabadka dahaarka kuleylka badan, waxay si gaar ah ugu habboon tahay alaabooyinka qaarkood ee u baahan dahaarka kuleylka oo leh qiime sare.
1-Gudbinta iftiinka ayaa ka badan 90%.
2-Waxay leedahay waxqabadka dahaarka kuleylka oo aad u sarreeya, waxay si gaar ah ugu habboon tahay alaabooyinka qaarkood ee u baahan dahaarka kuleylka oo leh qiime sare.
3-Greenhouse waxay leedahay muuqaal casri ah oo cusub, qaab dhismeed deggan.
4-Waxay ka hortagi kartaa baraf/dabayl culus oo xoog badan, aadna u fudud in la nadiifiyo lana dayactiro.
5-Waqtiga nolosha jirka weyn ee aqalka dhirta lagu koriyo waa in ka badan 20years.
Waxyaabaha Dhuxul kulul oo Dhuxul leh oo leh 275gsm dahaarka leh
Faa'iidada Gudbinta sare iyo xitaa iftiinka, Nolosha dheer iyo xoojinta sare
Caabin daxalka oo xoog leh iyo iska caabin dab
Farsamaynta dahaarka kuleylka ee wanaagsan.
Naqshad casri ah oo xarrago leh
Xamuulka barafka 0.35KN/m2
Awooda biyaha ee Max 120mm/h (5 daqiiqo markiiba)
Greenhouse ee awoodda rarka caadiga ah aqalka dhirta lagu koriyo ee awoodda rarka caadiga ah
Daboolidda aqalka dhirta lagu koriyo Saqafka-4,5.6,8,10mm hal lakab oo quraarad kulul leh
4-dhinac ku wareegsan: 4m+9A+4,5+6A+5 galaas godan
Greenhouse waxay isticmaashaa dherer dherer ah 9.6m/10.8m/12m
Isticmaalka Greenhouse -ka ayaa dheereya dhagaxa 2.5m-7m
Ku saabsan AX Glass Greenhouse
Sidaan wada ognahay, aqalka dhirta lagu koriyo ee Venlo ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday Nederland.
AX Greenhouse waxay si joogto ah wax ugu baratay adduunka oo dhan markay horumariso.
Sidaa darteed, 2005, waxaan bilownay inaan ku dhaqano aqalka dhirta lagu koriyo ee Venlo ee Shiinaha, oo ah dal leh deegaanno dabiici ah oo kala duwan.
Waxaan ka dhignay aqalka dhirta lagu koriyo ee Tibet, oo qabow iyo baraf leh, Xinjiang, oo kulul oo aan biyo lahayn, waxaanna ka dhignay aqalka dhirta lagu koriyo meelaha xeebta ah ee qoyan iyo doogga leh.
Sidaa darteed, waxaan uruurinay xog badan muddo ka badan 10 sano. Xog ku saabsan xogta sidda aqalka dhirta lagu koriyo iyo dhirta.
Iyada oo laga duulayo in la daboolo baahiyaha beeritaanka. Waxaan ururinay xog ku saabsan qaab dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo. Isla mar ahaantaana, annagoo gacanta ku hayna bay'ada aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan sidoo kale ururinay xogta kobaca dhirta.
Qalabka Qaab dhismeedka
Qaab dhismeedka bir-galvanized tayo sare leh, Zinc-daahan 275 g/m2, nolosha adeegga ka badan 20 sano.
Dhammaan agabyada birta ayaa lagu soo ururiyey goob, looma baahna farsamayn labaad.
Xidhiidhiyayaasha galvanized iyo fasteners ma daxalaysteen 20 sano.
Tilmaam: boodh-caddeyn, gudbinta iftiinka sare, waxqabadka dahaarka wanaagsan, Dhibicda ka hortagga ceeryaanta, cimri dherer
Dhumucdiis: galaas kulul: 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm.etc, // galaas godan: 5mm+8+5mm, 5mm+12+5mm, 6mm+6+6mm, 6mm+12+6mm, iwm.
Heerkulka Heerkulka: Laga bilaabo -40 ℃ ilaa -60 ℃
Nidaamyada Ikhtiyaariga ah
Nidaamka Qaboojinta: Suunka Qaboojinta
Qaboojinta aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu gaaraa mabda'a uumiga iyo qaboojinta biyaha. Suufka qaboojinta ee gaarka ah ayaa xaqiijin kara in biyuhu si siman u qoyaan dhammaan gidaarka suufka qaboojinta. Marka hawadu gasho dhexdhexaadinta suufka qaboojinta, waxay ku beddeshaa kulaylka uumiga biyaha ee dusha suufka qaboojinta si loo gaaro huurinta iyo qaboojinta hawada.
Nidaamka qaboojinta: Fan Qiiqa
Awoodda: 1100 w
Danab: 380V, 50Hz, PH1
Mugga hawada: 44000 m3/h
Buuq 60 decibel
Kuleylka kulul ee birta galvanized steel, daab taageere bir
Nidaamka hawo -mareenka
Nidaamka hawo -qaadashada ayaa inta badan loo adeegsadaa is -weydaarsiga gaaska gudaha iyo dibedda aqalka dhirta lagu koriyo. Si loo gaaro ujeeddada lagu hagaajinayo heerkulka, qoyaanka iyo uruurinta CO2 gudaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Hawo -qaadista dhinaca ama nidaamka hawo -qaadista sare ayaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha beeritaankaaga.
Mid waa nidaamka hawo -qaadista gacanta midna waa hab hawo -mareenka korontada.
Nidaamka Hadhka Gudaha
Ka-hortagga uumiga iyo faleebo-diidka
Badbaadinta tamarta iyo dahaarka
Daahyadu waxay u qaybsan yihiin laba nooc, hawo -qabad iyo hawo -la'aan. Noocyada kala duwan iyo heerka daahyada daahyada ayaa loo isticmaalaa hadba sida loogu baahdo. Si loo kordhiyo saamaynta dahaarka ee aqalka dhirta lagu koriyo, labalaab shabagyada gudaha ah ayaa la isticmaali karaa.
Nidaamka Hadhka Dibedda
Shaqada ugu weyn ee nidaamku waa qaboojinta iyo hooska xagaaga, si iftiinka qorraxdu ugu fido aqalka dhirta lagu koriyo si loo hubiyo in dalagga laga ilaaliyo iftiinka qoraxda. Anti-UV, roob-diidka, yaraynta waxyeellada xagga sare ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Hore: Jumlada OEM/ODM Shiinaha Ubaxyada Hemp Cbd Beerista Greenhouses Poly Carbonate PC Sheet Greenhouse for Hemp Planting Canada USA-PBSV001
Xiga: Dhawaan Yimid Shiinaha Julong Si Fudud Ayaa Loogu Rakibay Madoowga Filim Caag Ah Oo Loo Isticmaalay Iibinta
Dhammaan Greenhouse Green
Greenhouse China Glass
Muraayada daaqadda Muraayada
Muraayada Iyo Greenhouse -ka
Galvanized Steel Meegaarka Multi taako PE Film Green ...
Products Trending Shiinaha Transmittance Sare Venl ...
Warshadaha Professional Waayo Shiinaha Venlo Nooca T ...
Sicir -dhimista caadiga ah Shiinaha Venlo Nooca Muraayada Cagaaran ...
Factory Jumlada Jumlada Shiinaha Waxsoosaarka Beeraha ...
Shirkadaha Warshadaha ee Shiinaha Easy Installa ...
Cinwaanka: NO.879 Road Ganghua, aagga waqooyi ee Dekedda Warshadaha, Degmada Pidu, 611743, Chengdu, Gobolka Sichuan, Shiinaha
Taleefan: +86 18782297674